Kooxda Chelsea Oo wadda isku daygii igu dambeeyey Ee lagu fasixi lahaa Torres
HomeWararka MaantaKooxda Chelsea Oo wadda isku daygii igu dambeeyey Ee lagu fasixi lahaa Torres
Kooxda Chelsea ayaa ugu dambeyn fasixi doonta weeraryahankeeda Fernando Torres. Weeraryahanka reer Spain ayaa Stamford Bridge ugu soo dhaqaaqay adduun dhan £50m bishii January sannadkii 2011-kii, laakiin waxa uu dagaal xooggan ugu jiray muddo saddex sanno ah sidii uu uga mid noqon lahaa xiddigaha safka hore ee ay ku duusho kooxda Chelsea.
Sida ay warinayso jariiradda The Mirror, tababare Jose Mourinho ayaa dhaleeceyn xooggan dusha kaga tuuray Torres, kaddib guuldarradii habeenkii Arbacada ka soo gaadhay naadiga Paris Saint-Germain lugta hore wareegga sideedda Champions League, wuxuuna macallin Mourinho isku dayayaa inuu haatan ciyaaryahankan ka diro kooxda.
Kooxda Talyaaniga ee Inter Milan ayaa xiiseynaysa xiddigan, waxaana ay dooneysaa inay Torres gacanta u galiso sannadkii £9m. Si kastaba, arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli tababare ku xigeenkii hore ee kooxda Chelsea Ray Wilkins uu sheegay in weeraryahankii hore ee Liverpool uu soo dhammaaday mustaqbalkiisa garoonka Stamford Bridge.